About Us - Ningbo Hanor qabriga maryo Co., Ltd
Hanor qabriga maryo ku yaalla Ningbo Shiinaha, inta badan sameeyo iyo dhoofin kala duwan ee dharka ilmaha iyo dharka guriga. Khadadka wax soo saarka dharka Our ka mid buste ilmaha, dhar cunug ilmaha, tuujin, ilmahaaga, marada ilmaha, ilmaha tuwaal wadanay, maro daacsii ilmaha, xafaayadda ilmaha, qubeyska ilmaha iyo dharka ilmahaaga. Waxaan sidoo kale ku takhasusay buste dhogorta, shukumaan qubeyska, shukumaan xeebta, qubeyska dadka waaweyn, barkin, cover barkin iyo baco sariirta.
Waxaan ku sameeyay xiriirka ganacsi wanaagsan macaamiisha labada gudaha iyo dibaddaba. Iyadoo our waayo-aragnimo dhoofinta hodan, alaabta oo tayo sare leh, qiimaha tartan rasmi ah, adeeg ka xoogbadan, iyo gaarsiinta on-mar, waa wanaagsan in aan la kulmi karo shuruudaha iyo ka badan aad ka filayso.
Waxaan mar walba ku hayaa ballaariyo salka macaamiisha. Haddii aad xiisaynayso in mid ka mid ah our taxane, fadlan nala soo xidhiidh wixii macluumaad dheeraad ah. Aad ku qanacsan yahay ujeedada dadaalka aan ugu jirno, wax waydiinta iyo su'aasha waxay noqon doontaa dareenka si raxmad leh oo reply degdeg la noo oolnimada sare, daacadnimo.
Room 1215, Haiguang Building, No. 298, Zhongshan West Road, Ningbo, Shiinaha.
Copyright 2018 Ningbo Yinzhou Hanor Company Limited qabriga maryo. All Rights Reserved.